သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန - ဝီကီပီးဒီးယား
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန (တနည်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ အင်္ဂလိပ်: Office of the President of the Republic of the Union of Myanmar) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ရုံး ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရ လွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) က ဦးလွင်ကိုလတ်အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ခေတ္တပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ထားသည်။
သမ္မတရုံး - နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၊နေပြည်တော်
ဝန်ကြီးဌာန - ရုံးအမှတ် (၁၈)၊ ​နေပြည်​တော်
၅ သမ္မတအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ (၂၀၁၁-၂၀၁၆)
စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသို့ကူးပြောင်းရာ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို လက်ခံကျင်းပရန်နှင့် ၂၀၁၄အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို လက်ခံကျင်းပရန်အတွက် ၂၀၁၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနကို ဝန်ကြီးဌာန၆ခုအထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၉ရက်နေ့တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ထိုစဉ်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ပထမဆုံးသော ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ထို့နောက်တွင် သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။သမ္မတဦးထင်ကျော်လက်ထက်တွင် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းအဖြစ်လျှော့ချခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဝန်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဦးစီးရုံး
ဒုတိယသမ္မတ (၂) ဦးစီးရုံး
သုတေသန၊ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားစာများဌာနကြီး
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများရုံးထိုင်သည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တွင် ထားရှိထားသည်။ထိုရုံးကို တာဝန်ခံသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနအား နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၁၈)တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တွဲ၍ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်အနီးတွင် ဝန်ကြီးရုံးအသစ် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ရုံးအမှတ် (၁၈)သည် ယခင် နအဖအစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံးနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးဌာနတို့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ရုံးအဆောက်အဦးဖြစ်သည်။
၁ ဦးသိန်းညွန့် ၃၀ မတ် ၂၀၁၁ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁၈၂၇
USDP ဦးသိန်းစိန် -
၂ ဦးစိုးမောင် ၃၀ မတ် ၂၀၁၁ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁၈၂၇
ဦးစိုးသိန်း ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁၃၁၁
ဦးအောင်မင်း ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁၃၁၁
၅ ဦးလှထွန်း ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁၃၁၁
၆ ဦးတင်နိုင်သိန်း ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁၃၁၁
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ၁၇၆၉
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် စီးပွားရေး၊ သာသနာရေး၊ဥပဒေ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာသမ္မတအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်၉ဦးကို ၂၀၁၁ခုနှစ် ဧပြီ၁၉ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။၂၀၁၄ခုနှစ် ဇွန်လ၁၈ရက်နေ့တွင် ဦးမြင့်မောင်နှင့် ဦးစိန်ဝင်းအောင်ကို သာသနာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ထပ်မံခန့်အပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ခုနှစ်အထိ သမ္မတအကြံပေးအချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "စစ်ဘက် အရာရှိဟောင်း ဦးမင်းသူ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီး ဖြစ်လာရန်ရှိ"။
↑ Nyein Nyein။ "Four New Ministries Created in President’s Office"၊ The Irrawaddy၊4September 2012။
↑ "Burma President’s Office Appoints First Spokesperson"၊ The Irrawaddy၊9January 2013။
↑ "နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန"၊ National Web Portal။ Archived from the original on2April 2019။
↑ "နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနရုံး တည်ဆောက်ရန် ကျပ်ရှစ်ဘီလီယံကျော် ဘတ်ဂျက်တောင်း"။ 14 May 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 May 2021။
↑ "Myanmar president pledges to work for best of nation with advisory board"၊ CCTV၊5April 2011။ Archived from the original on7July 2015။
↑ Notification No. 53/2013။ Republic of the Union of Myanmar President Office (7 August 2013)။
↑ Mathieson၊ David Scott။ "Burma: the Clash of Church, State, and Society"၊ Human Rights Watch၊9July 2014။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Notification (No. 40/2014)။ Republic of the Union of Myanmar Union Government (18 June 2014)။
↑ Kyaw Hsu Mon။ "Burmese President Appoints New Religious Advisors"၊ The Irrawaddy၊ 19 June 2014။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ "Advisory Board"၊ Alternative Asean Network on Burma၊9September 2013။ Archived from the original on5December 2014။
ဤ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သမ္မတရုံး_ဝန်ကြီးဌာန&oldid=743873" မှ ရယူရန်
၁၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၁:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၁:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။